Dib-u-Rukuumasho for Software PHOTORECOVERY® [PC] | Data Recovery
Dib-u-Rukuumasho for Software PHOTORECOVERY® [PC]
Home → Dib-u-Rukuumasho for Software PHOTORECOVERY® [PC]
PHOTORECOVERY® U bandhigidda Gaarka PRO!
PHOTORECOVERY® PRO leeyahay oo dhan oo ka mid ah sifooyinka badan oo PHOTORECOVERY®, laakiin waxa ay sidoo kale ka mid ah Digital Media Doctor for Performance Imtixaanka iyo Soo Celinta Media. Waxaad awoodi kartaa si deg deg ah ee kaabta, masax, format, iyo soo celinta kuwa loo isticmaalo Digital Memory Cards in a “sida cusub” heerka waxqabadka. Waxaad ogaan doontaa markii uu u bedelo kaararka xusuusta aad – ogaado ka hor inta ay goori goor tahay!
Waxaad cusboonaysiin karaan Times aad u PRO PHOTORECOVERY® at kala bar qiimaha tafaariiqda! Riix badhanka Buy Haddaba kor ku xusan in la cusboonaysiiyo, waayo, $30!
PHOTORECOVERY® Ugu deeq u Gaarka ah!
Fadlan guji badhanka Buy Haddaba si loo cusboonaysiiyo aad Times hal sano PHOTORECOVERY® waayo, $20!
Si aad u cusboonaysiiso, waxaad u baahan doontaa in ay soo baxdo iyo rakibi version cusub ee software-ka ka dib marka aad dhammaystirto iibka cusboonaysiinta. ka dibna, rakibidda version cusub ee badali doona version hore oo laguu ogolaado in aad si aad u bilowdo adigoo isticmaalaya tiro serial cusub ka rasiidka.